Sukujonga nje kwiNgcebiso ye-SEO Iceberg | Martech Zone
Sukujonga nje kwiNgcebiso ye-SEO Iceberg
NgoLwesithathu, Septemba 7, 2011 NgeCawa, Oktobha 30, 2011 Douglas Karr
Enye yeenkampani ze-SEO zazidla ngokuba nefoto ye-iceberg kwiphepha lasekhaya. Ndiyakuthanda ukufaniswa kwe-iceberg xa kuziwa ekusebenziseni injini yokukhangela. Incoko yakutshanje ebesinayo nomthengi malunga nokubuya kwabo kuhlahlo-lwabiwo mali lweeNjini zoPhando zibambe inkxalabo yokuba befumana kuphela iindwendwe ezimbalwa ezizodwa kunyaka ophelileyo ibinzana elingundoqo besijolise, sazisa kwaye silanda umkhondo.
Igama eliphambili lahlukile kwaye andinayo imvume yokwabelana ngalo…. kodwa kuphononongo lwabo kubahlalutyi, ba zaye Ukufumana utyelelo nje oluncinci… ngenxa yoko ngqo igama elingundoqo. Nangona kunjalo, bekukho malunga ne-200 yondwendwelo ngenyanga kukhangelo olunxulumene namagama aphambili ngaphambi kokuba sisebenze ekusebenziseni. Emva kwenkqubo ye-SEO ephumeleleyo ebasa kwi # 1, ekhule yaya kutyelelo olungaphezulu kwe-1,000 XNUMX ngenyanga. Amagama aphambili ngokwawo akhokelela kuphela kutyelelo oluninzi ngaphambili nangasemva. Umthengi wayelinganisa kuphela ixesha ngqo ayizizo zonke izithuthi ezifanelekileyo, ezinxulumene noko.
Kwakukho amagama angamagama angama-266 ahambelana nawo apho umthengi wayefumana ukugcwala kwabantu ngaphambi kwenkqubo. Oko kuye kwanda kwaba ngamagama aphambili angama-1,141 ahambelana negama abebefumana ukugcwala kupapasho kunye nokwenza ngcono. Ezo 1,141 ezinxulumene nokukhangelwa kwegama kukhokelele ngaphezulu Iindwendwe ezingama-20,000 XNUMX ezintsha kwisiza. Xa ubala ukubuya ukuba Utyalomali, luphumelele ngokwenene. Loo magama ayaziwa njenge amagama angumsila omde, kwaye ngamanye amaxesha baninzi abathengi, imali kunye nethuba apho kunokulwa nokhuphiswano kumagama aphambili asezantsi.
Eyona nto iphambili kukuba i-SEO ayifani nokuthenga igama eliphambili nge-PPC. Ukukhangela okungokwemvelo kunethuba lokukhulisa ukugcwala kwakho kuyo yonke inethiwekhi yamagama aphambili. Oku kubalulekile kwisicwangciso sakho seinjini yokukhangela. Ukuba lonke ujoliso lwakho lujolise kwi incam yomkhenkce, awunikeli ngqalelo kwimilinganiselo ephezulu yezithuthi ezinamagama ophando ahambelana nawo.
Elinye icebo apho lo ngumba kukukhangelwa kwendawo. Highbridge Kutshanje kwenziwe uphicotho lwe-SEO kwinkampani esekwe kwinkonzo esebenza kuzwelonke. Ukunyusa kwabo, umxholo wabo, ulawulo lwendawo yabo-isicwangciso sabo sonke se-SEO-sijolise kuphela kwimigaqo esekwe kwinkonzo ngokubanzi ngaphandle kwejografi.
Abo bakhuphisana nabo batya isidlo sabo sasemini- ukufumana i kalikhulu lezithuthi ngenxa yokuba abo bakhuphisana nabo bejolise kwijografi ngobundlongondlongo njengomxholo wenkonzo. Xa le nkampani yayisebenza kunye nabo Umcebisi weSEO, iJografi khange ivele kwincoko kuba umthamo wokukhangela awubalulekanga. Ingcali ye-SEO ijolise kwincam yomkhenkce… kwaye yaphoswa ngama-90% + yokukhangela kwegama elingundoqo, elingumgama.
Inkampani isengxakini… banemihlaba emininzi yokuzama ukwenza ukuba banethemba lokuba yinkokheli kuphando olunxulumene nenkonzo. Inyani yile yokuba uphando lwasekhaya yi Ixesha eliphambili xa ukhangela iinkonzo zommandla. Awuyi kukhangela "ukuhlamba imoto" kuGoogle… uza kukhangela ubumelwane bakho okanye isixeko ukongeza kwi "car wash". Akunakubakho ukuphakama okuphezulu kwe "Albuquerque car wash"… kodwa dibanisa zonke iidolophu eUnited States ngokuhlamba imoto kwaye lelo linani ELIKHULU.
Kulungile ukuhambisa isicwangciso kwincam yomkhenkce, ulinganise, ukujonga kwaye ulungiselele oko. Nangona kunjalo, ungalibali ukuba usebenza ngengcebiso kuphela!
I-Anatomy yeFacebook yeFani
Ngaba indawo okuyo iyabandezeleka ngenxa yokuLungiswa kwangaphambili?